John Barnes Oo Magacaabay LABADA Xiddig Ee Noqonaya 'Mustaqbalka Khadka Dhexe Ee Liverpool' - GOOL24.NET
John Barnes Oo Magacaabay LABADA Xiddig Ee Noqonaya ‘Mustaqbalka Khadka Dhexe Ee Liverpool’
Halyeygii Liverpool ee John Barnes ayaa magacaabay labada ciyaartoy ee ay u baahan tahay khadka dhexe ee kooxdiisa hore, kuwaas oo haddii ay yimaaddaan Anfield kusoo kordhin doona wax badan.
Liverpool ayaa uu isbeddel ku yimid khadkeeda dhexe xagaagii markaas oo uu ka tegay Gini Wijnaldum, taas oo tababare Klopp ku yaraysay kala-doorashada.
Jordan Henderson iyo Thiago Alcantara ayay da’doodu sare u dhaaftay 30 jir, waxaanay taasi ku keenaysaa kooxda inay haddaba raadsadaan beddelkooda, si ay waqti ugula sii qaataan Anfield oo ay ula sii jaan-qaadaan kubadda Liverpool.
John Barnes ayaa rumaysan in labada ciyaartoy ee Jude Bellingham iyo Yves Bissouma ay yihiin labada laacib ee ay u baahan tahay Liverpool inay iska garab ciyaarsiiso mustaqbalka, isla markaana ay haddaba ka shaqayso sidii ay ku keeni lahayd Anfield.
Borussia Dortmund ayaa dalban doonta lacag aan ka yarayn £90 milyan oo Gini haddii ay Liverpool dalbato Jude Bellignham, halka Bissouma oo Brighton khadka dhexe uga ciyaara uu isagu qiime intaas ka hooseeya ku iman karo Anfield.
“Jude Bellignham waxa uu Liverpool u noqon lahaa xoog kusoo kordhay, laakiin ilama aha inuu bisha January iman karayo.” Ayuu yidhi Barnes oo intaa raaciyey: “Yves Bissouma oo Brighton jooga ayaa sidoo kale kusoo baxaya saddexda khad-dhexe ee Liverpool.
“Labadan ciyaartoy ayay tahay in Liverpool ay raadiso, laakiin midkoodna iima muuqato in January uu imanayo.”